January 2022 – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on रक्सी खाँदै नखानुहोस्, खानै परे कति खाने ? कसरी खाने ?
डा. प्रकाशराज रेग्मी –
बियर ३–८% वाइन ८–१२% रम ४०–४५% जिन ४०–४५% ब्राण्डी ४०–४५% भोड्का ४०–४५% ह्विस्की ४०–४५%
रक्सीको किसिम मात्रा क्यालोरी बियर २५० मि.ली. (१ गिलास) १२२ ब्रान्डी ३० मि.लि. (१ पेग) ९८ जिन ३० मि.लि. (१ पेग) ८४
रम ३० मि.लि. (१ पेग) ९८ ह्वीस्की ३० मि.लि. (१ पेग) ९१ रेड वाइन १०० मि.लि. (१.५ गिलास) ८२ सेतो वाइन १०० मि.लि. (१.५ गिलास) ७५
रक्सीको सेवन सम्बन्धमा म यस प्रकारको सल्लाह दिन चाहन्छु : रक्सी नपिउने गरेकाहरुले रक्सी पिउन शुरु नगरेकै राम्रो
२० वर्ष उमेर नपुगेकाहरूले रक्सीको सेवन नगर्नु उचित गर्भवती महिलाले रक्सी सेवन गर्नु हानीकारक
No Comments on यिनै हुन् २० बर्षिया कञ्चन पराजुली जस्ले आफ्नै घरबेटीसंग खेलिन डरलाग्दो गेम, साथमा थिए ३ युवक !
पेट दुखेर नजिकैको क्लीनिकमा लगियो १३ वर्षकी किशोरीलाई, छोरी जन्मिएपछि खुल्यो मनिरामको पोल
No Comments on पेट दुखेर नजिकैको क्लीनिकमा लगियो १३ वर्षकी किशोरीलाई, छोरी जन्मिएपछि खुल्यो मनिरामको पोल
काठमाडौ । आफुले गरेको गल्ती छोप्न बर्दियाका मनिराम थारुले १३ वर्षकी किशोरीलाई अचानक नजिकैको क्लीनिक लिएर गए । किशोरीको पेट दुखेको थियो । तर किशोरीले छोरी जन्माएपछि उनै मनिरामको गल्ती सबैका सामु सार्वजनिक भएको छ । वैशाखमा मनिरामले १३ वर्षकी किशोरीलाई उनको इच्छा विपरित क र णी गरेका थिए ।
घरमा कोही नभएको मौका पारी उनले गरेको गल्ती कसैले थाहा पाएका थिएनन् । तर गर्भ बस्न पुग्दा १३ वर्षकी किशोरीले छोरी जन्माएकी छन्। गत वैशाख २७ गते बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका(६ बस्ने ४१ वर्षीय मनिराम थारुले यस्तो काम गरेका थिए ।
किशोरी आफ्नो घरमा एक्लै भएको अवस्थामा ड र देखाएर थारुले उनी माथि त्यस्तो कुक र्म गरेको खुलेको छ । बालिकामाथि क र णी भएर उनी गर्भवती बनेकी थिइन्। त्यसपछि बालिकाको गर्भमा बच्चा रहेको अरुलाई थाहा नदिइ थारुले यही आइतवार नजिकको क्लिनका लगेका थिए।
किशोरीको एक्कासी पेट दुखेपछि क्लिनिकमा उपचार गराउने क्रममा भिडिओ एक्सरे गराउँदा गर्भ रहेको खुलेको थियो। उनले आइतवारै छोरीलाई जन्म दिएकी छन्। यो घटना खुलेपछि आइतवारै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाको टोलीले मनिरामलाई पक्राउ गरेको छ। बर्दिया जिल्ला अदालत गुलरियाबाट म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
No Comments on पाथिभरा माताले हामी सबैको कल्याण गरुन्, हेर्नुहोस् माघ १८ गते मंगलबारको राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि।स।२०७८ साल माघ १८ गते मंगलबार इश्वी सन २०२२ फेब्रुवरी १ तारीख माघ कृष्ण पक्ष औंसी तिथी श्रवण नक्षत्र सिद्धि योग नाग करण चन्द्रमा मकर राशिमा आनन्दादि योगमा लुम्व योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु स्नानदानका लागी औंशी हलो बार्ने आर्गघाटमा माधवनारायणमेला नवल परासि त्रिवेणि मेला ९ज्यो।प।सरोज घिमिरे०
देउवाले यस्तो कदमले प्रचण्ड र माधव नेपाल झस्किए
No Comments on देउवाले यस्तो कदमले प्रचण्ड र माधव नेपाल झस्किए
काठमाडौं :प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी प्रस्ताव पास गर्न गठबन्धनभित्र दबाब दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले दबाब दिन थालेपछि गठबन्धानमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवासँग केही समय मागेका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्ड–नेपालले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि केही समय मागेका छन् । यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी प्रस्ताव पास गर्ने संकेत देखिएपछि सभामुख अग्नी सापकोटाले अचानक संसद बैठकसमेत स्थगित गरेका छन् ,’ स्रोतले भन्यो ।
यसअघि सभामुखले १६ माघमा प्रतिनिधि सभाको बैठक तोकेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीबाट एमसीसी प्रस्ताव आउने संकेत कै कारण उनले २६ माघलाई संसद बैठक तोकिएका छ । यस्तै, अमेरिकाले पनि नेपालले १ फेब्रुअरीसम्ममा एमसीसी प्रस्ताव पास नगरे यो कार्यक्रम नै फिर्ता लैजाने जनाएको छ ।
सर्वाधिक चर्चित अभिनेत्री रश्मिका मन्डन्ना उप्स मोमेन्टको शिकार, कसरी भयो यो दुर्घटना !(भिडियो सहित)
No Comments on सर्वाधिक चर्चित अभिनेत्री रश्मिका मन्डन्ना उप्स मोमेन्टको शिकार, कसरी भयो यो दुर्घटना !(भिडियो सहित)
मनोरञ्जन ब्यूरो । हामी सबैलाई थाहा छ मनोरञ्जन र कलाको ​​संसारमा फेसन र शैली कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ।
यही कारणले गर्दा, अभिनेत्रीहरू हरेक विशेष अवसरमा अद्वितीय र विलासी पोशाकमा देखिन्छन्। तर कहिलेकाहीँ आफ्नो फेसनलाई देखाउनको लागि सेलिब्रेटीहरूले यसलाई यतिसम्मको हद पार गर्छन् कि जो कोहीले ओप्स भन्नै पर्छ ।
पोसाकले गोप्यता समेत भंग गरिदिँदा उनीहरु लज्जितको शिकार हुनु परेको छ । साउथकी चर्चित अभिनेत्री रश्मिका मन्डन्ना पनि हालै यस्तै एउटा उफ्स पलको शिकार भइन् ।
च्याट शोका क्रममा रश्मिकासँग दुर्घटना
यो घटना एक च्याट शोको क्रममा भएको थियो जसका कारण रश्मिकाको तस्विर भाइरल भइरहेको छ । रश्मिकाले च्याट शोमा पहेँलो कलरको सर्ट ड्रेस लगाएकी थिइन् ।
उनले कार्यक्रमको होस्टसँग कुरा गरिरहेकी थिइन् जब उनले आफ्नो सिट परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिन्। उनी क्रस लेग पोजिसनमा बसिरहेकी थिइन्, जब रश्मिका छोटो पोशाकका कारण उप्स मोमेन्टको शिकार हुनुपरेको थियो ।
पछि रश्मिका आफैले पनि बारम्बार आफ्नो ड्रेस फिक्स गरेको देखियो ।
अभिनेत्रीको यो पल क्यामेरामा कैद भयो जसको तस्विर अहिले इन्टरनेटमा भाइरल भइरहेको छ । यो घटनापछि केही प्रयोगकर्ताले रश्मिकालाई छोटो पोशाक लगाएको भन्दै ट्रोल पनि गरेका छन् ।
रश्मिकाले सिद्धार्थ मल्होत्रासँग बलिउडमा डेब्यू गरेकी हुन्
करोडौंको मुटुको धड्कन बढाएकी साउथकी सुन्दरी अभिनेत्री रश्मिका मन्डन्ना पनि चलचित्र पुष्पालाई लिएर यतिबेला निकै चर्चामा छिन् । फिल्ममा रश्मिकाको देसी शैलीले दर्शकको मनमा गहिरो छाप छोडेको छ ।
उनका आगामी चलचित्रहरूमा आडावल्लु मीकु जोहारलु, मिशन मजनु, गुडबाई, पुष्पा २ समावेश छन्। रश्मिका सिद्धार्थ मल्होत्रासँग मिशन मजनुमा देखिनेछिन् । यो उनको बलिउड डेब्यु चलचित्र हो जसको सुटिङ चलिरहेको छ ।
बौद्धबाट ७४ जना पक्राउ परेका यी ब्याक्ति को हुन् ?
No Comments on बौद्धबाट ७४ जना पक्राउ परेका यी ब्याक्ति को हुन् ?
काठमाडौं। प्रहरीले अनलाइन जुवा खेलाइरहेको अवस्थामा बौद्धबाट ७४ जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी बृत्त बौद्धको टोलीले ८ महिलासहित ७४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
आइतवार राति ७ बजेतिर काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ६ बौद्धस्थित प्लटिङ नजिकै दोलखा घर भएका ३० वर्षीय सुभाष घिसिङले सञ्चालन गरिरहेको रेष्टुरेन्टमा प्रहरीले छापा मा’रेको थियो। त्यसक्रममा नगदसहित उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको परिसरका एसपी दिनेश मैनालीले जानकारी दिए।
प्रेमी हुन त यस्ता ! गर्लफ्रेण्डसँग १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ लिए त्यसपछि फिर्ता नदिइ ‘मरे’ !
No Comments on प्रेमी हुन त यस्ता ! गर्लफ्रेण्डसँग १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ लिए त्यसपछि फिर्ता नदिइ ‘मरे’ !
एक बेलायती युवतीले डेटिङ साइटमा भेटिएका एक युवकले आफूलाई धोका दिएको कहानी अनलाइनमा शेयर गरेकी छिन् । उनका अनुसार पहिलो पटक डेटिङ साइटमा भेटेपछि उनीहरुले एक अर्काको नम्बर लिए । विस्तारै उनीहरुको प्रेम बढ्दै गयो । युवती ती युवकसँग बिहे गर्ने सपना सजाउन थालिन् । तर, एक दिन यस्तो भयो जसले सबै कुरा बदलिदियो ।
युवतीलाई १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ठगेर ती युवक ‘मरे’ । युवतीले स्वयं ती धोकेबाज युवकको कहानी बताएकी छिन् जसले डेटिङ साइटमा उनीसँग प्रेमपूर्ण कुरा गरेर उनलाई धोका दिए । युवतीले आफ्नो कहानी बेलायती अखबार मेट्रोमा लेखेकी छिन् । उनको नाम गोपनीय राखिएको छ । उनका अनुसार उनले ती धोकेबाज युवकलाई २०२० को अप्रिलमा एक डेटिङ साइटमा भेटेकी थिइन् ।
केही दिनमै युवतीलाई ती युवक सच्चा र केयरिङ लाग्न थाले । केही दिनमा उनीहरुले मोवाइल नम्बर आदान प्रदान गरे र ह्वाट्सएपमा कुरा गर्न थाले । युवतीका अनुसार उनीहरुले एक अर्काका भोगाइहरु साझा गर्न सुरु गरेका थिए । उनका अनुसार उनलाई युवकले आफूलाई सुनिरहेको, बुझिरहेको र आफुहरु नजिक भइरहेको जस्तो लाग्थ्यो ।
उनलाई आफूहरु लामो समयको लागि सम्बन्धमा रहन चाहेको महसुस हुन थाल्यो । यदि सबै कुरा ठिक भएको भए उनीहरु बिहे पनि गर्थे । लकडाउनका कारण उनीहरु भेट्न सक्दैनथे तर म्यासेज, कल आदि माध्यमबाट सम्पर्कमा थिए । युवतीका अनुसार कुरा सुरु भएको करिब १ महिनापछि निकले उनीसँग पैसा मागे ।
फेशन डिजाइनरको रुपमा निकले निकै ठूलो कन्ट्रयाक्ट पाएको बताए । तर, उनका सामान टर्कीको कस्टममा रोकिएको थियो र यो पाउन उनलाई २५ हजार पाउण्ड चाहिएको थियो । युवतीले उनलाई साथीहरु वा बैंकबाट पैसा माग्न भन्दा उनले टारे । पछि उनले केही पैसा जम्मा गरेको तर अझै १५ हजार पाउण्ड कम भएको बताए । त्यतिबेला युवतीलाई केही शंका भएको थियो तैपनि उनले १५ हजार पाउण्ड दिइन् ।
निकले उनीसँग १० दिनमा पैसा फिर्ता दिने भनेका थिए तर १० दिन बितेपछि उनले पैसा फिर्ता दिनुको सट्टा अरु बहाना बनाउन थाले । यतिमात्र होइन नयाँ नयाँ समस्या बताएर युवतीसँग अरु पैसा लिन थाले । निकले कहिले गरिबीको बहाना बनाएर कहिले बिरामी भएको बहाना बनाएर पैसा माग्थे । कहिलेकाहीँ उनी ऋण तिर्नको लागि पनि पैसा माग्थे ।
यो लेनदेन २ महिना चल्यो । यस क्रममा उनले ८ पटक निकले भनेका ३ बैंक खातामा पैसा पठाएकी थिइन् । सबै गरेर उनले १ लाख २ हजार पाउण्ड (१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ) पठाएकी थिइन् । जुन २०२० मा युवतीले निकलाई फोन गर्दा उनकी कथित छोरीले निकको मृ त्यु भइसकेको बताइन् । युवतीले उनलाई निकले आफूसँग पैसा लिएको बताएपछि कथित छोरीले पैसा फिर्ता दिने विषयमा विचार गर्ने बताइन् ।
आफू ठगिएको शंका भएपछि युवतीले पुलिस र बैंकमा सम्पर्क गरिन् । त्यसपछि जाँच अगाडि बढ्यो । अहिलेसम्म एउटा बैंकबाट ट्रान्सफर गरिएको रकम फिर्ता आएको छ । अन्य बैंकहरु प्रक्रियामै छन् । पुलिसले डेटिङ एपबाट जानकारी जुटइरहेको छ । अहिले ती युवतीले अरु मानिसहरुलाई यसप्रकारको ठगीबारे सचेत गराएकी छिन् ।
१६ दिनपछि घर पुगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन : पर्खाइमा रहेकी प्यारी छोरीको यो स्वागतले स्तब्ध
No Comments on १६ दिनपछि घर पुगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन : पर्खाइमा रहेकी प्यारी छोरीको यो स्वागतले स्तब्ध
काठमाडौं । दक्षिण भारतका सुपरस्टार अभिनेता अल्लु अर्जुन अहिले निकै चर्चामा छन् ।१६ दिनको सुटिङपछि घर फर्किएपछि उनका छोराछोरीले उनलाई विशेष ढंगले स्वागत गरेका हुन् ।अल्लु अर्जुनले आफ्नो इन्स्टा पोस्टमा बालबालिकाले बनाएको यो सुन्दर रंगोली सेयर गरेका छन् ।
पुष्पा फिल्मका मुख्य अभिनेता अल्लु अर्जुनले सेयर गरेको तस्विरमा फूलले ‘वेलकम नाना’ लेखिएको देख्न सकिन्छ भने अगाडि उनकी कान्छी छोरी उभिएको देखिन्छ ।यो पोस्ट सेयर गर्दै अल्लु अर्जुनले लेखेका छन्, ‘१६ दिन बाहिर बसेर फर्किएपछि मलाई यसरी विशेष स्वागत गरियो ।’
उनको पोस्टलाई छोटो समयमा १७ लाखभन्दा बढी लाइक प्राप्त भएका छन् ।कमेन्टमा मानिसहरू अल्लु अर्जुनका छोराछोरीको तारिफ गरिरहेका छन् । एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘तपाईंका बच्चाहरूले तपाईंलाई धेरै माया गर्छन् ।’
यस पोस्ट बाहेक अल्लु अर्जुनले आफ्नो इन्स्टा स्टोरीमा एउटा भिडियो पनि सेयर गरेका छन्, जसमा उनकी छोरीले उनलाई तमिलमा केही भन्दै छिन् ।अल्लु अर्जुनकी छोरीको नाम अरहा र छोराको नाम अयान हो । अल्लु अर्जुनको फिल्म पुष्पा ब्लकबस्टर हिट भएको छ । भारतमा मात्रै नभई विदेशमा पनि फिल्मको तारिफ भइरहेको छ ।
अल्लु अर्जुनले सन् २०११ मा स्नेहा रेड्डीसँग विवाह गरेका थिए । दुबैका २ सन्तान छन् । छोराको नाम आयन र छोरीको नाम अरहा हो ।अल्लु र अरहा चाँडै फिल्म ‘शकुन्तलम’ मा काम गर्दैछन् । अल्लु र उनकी छोरी फिल्ममा सँगै देखिने बताइएको छ ।
केटाकेटी उपयुक्त तरिकाले हुर्काउँने भए गाउँ लिएर जानुस् : तस्विर र यी शब्द किन भए भाइरल ?
No Comments on केटाकेटी उपयुक्त तरिकाले हुर्काउँने भए गाउँ लिएर जानुस् : तस्विर र यी शब्द किन भए भाइरल ?
काठमाडौं । ‘मायालुको शहरमा मेरो गाउँमा घर छ’ गीत खुबै चर्चामा रहेको थियो ।
गीतमा गाउँ र शहरमा हुने भिन्नता देखाउन खोजिएको थियो । पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालमा केहि न केहि भाइरल हुने गर्छ ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक तस्विर खुबै चर्चामा रहेको छ । कुल्लु र मनाली, भारतकी तिशा डोगराले एक युवतीको तस्विर साझा गरिन् । तस्विरसँगै क्याप्सन लेखिएको छ, ‘सहरी बालबालिकालाई गाउँमा लैजानुहोस् नत्र यस्तो भइरहनेछ ।’
एक युवती गोबरको तस्विर लिइरहेकी छिन् । हजारौंले मन पराएको सो तस्विरमा सयौंको संख्यामा प्रतिकृयाहरु आइरहेका छन् । मञ्जु लेख्छिन्, ‘तपाईंका अनुसार सहरमा गाईको गोबरबारे जानकार हुँदैनन् ।
सहरका बालबालिका गाईको गोबरप्रति पूर्णतया अनभिज्ञ छन् किनभने शहरमा गाई गोबर गर्दैन् ।’ एक आमा लेख्छिन्, ‘साँचो, केटाकेटी हुर्काउनको लागि एउटा गाउँ चाहिन्छ ।
रमाइलो एक ठाउँमा, जब मैले मेरा बच्चाहरूलाई मेरो पुर्खाको गाउँमा लिएर गएँ, तिनीहरू मन्त्रमुग्ध थिए । तिनीहरूलाई आफ्नो जग थाहा दिनुहोस् ।’ यसमा थरी थरीका रमाइला प्रतिकृयाहरु आइरहेका छन् ।